Barreessituun Yugaandaa jireenyishee Maanchistar ta'e badhaasa dolaara kuma 165 mo'atte - BBC News Afaan Oromoo
Barreessituun Yugaandaa jireenyishee Maanchistar ta'e badhaasa dolaara kuma 165 mo'atte
Image copyright Mark Rusher
Goodayyaa suuraa Jeniifar Naansubugaa Maakumbi Yugaanddaarraa gara UK tti kana imalte umurii waggaa 34 wayita turteedha.
Jeniifar Naanbugaa Maakumbi jiraattuu Maanchistar kan taateefi duraan maxxansitootni Biritishiin kitaabashee maxxansuu didamee amma badhaasa dureessa addunyaa beekamaa mo'ateera.
Jeniifar Naanbugaa Maakumbi
Jennifer Nansubuga Makumbi - kan lammii Yugaandaa waggaa 17 dura dhufte gara UK kan deemte amma badhaasa 'Windham Campbell Prizes' jedhamu Yunivarsitii Yeel Ameerikaatti argamu irraa argatte.
Isheenis doolaara kuma 165 (£119,000) argatte. "Bara dheeraaf kuufachaan ture'' jettee jirti.
"Waan hundumaa barreefamaanan kaa'ee. Kanaafu, haala hineegamneen kun ta'u kan danda'e.''
Maallaqni badhaasaas kunis badhaasa mo'ataan kitaataa argatuun dachaadha. Kanaafu, qindeessitoonni 'Novila Piraayiziitti' aansee badhaasa baayyee guddaa ta'u subbatu qopheessitoonni.
Maakumbiin badhaasa 'Windham Campbell Prizes' kana argachuuf barreessitoota saddeetti keessa bara kanatti tokkodha.
Barreesitoonni Biritish kan biraa lamas barreefama seenaa ogbarruu (Non-fiction) tiin tartiiba kanarratti argamu; Saaraa Baakewel fi Oliviyaa Laa'ingi.
'Baayyee Afriikaa kan ta'ee''
Badhaasni kunis barreessaa Donaald Wiindhaamiin kan umameefi naqaa haadha warraa isaa 'Sandy M Campbell' kan qabateedha. Badhaasni kunis yeroo jalqabaatiif '' barressitootaaf carraa yaaddoo maalaqaa tokko malee hojii isaanii irratti akka xiyyeefatan kennuuf' jech bara 2013tti ture.
Maakumbi akka jettutti oduun badhaasicha akkuma tasaatti kan dhufeedha. ''Innis Ameerikaa biyya itti namoonni kitaaba baay'ee qaban (dhoksanii).'' ''Kanaafuu attamiin akkan isaan keessaa tokko itti ta'e baayyeen dinqisiifadha.''
Kitaabni Maakumbi 'Kintu' yeroo jalqabaatiif kan maxxanfame Keeniyaa keessatti waggoota afuriin dura yoo ta'u, kunis erga maxxansitoonni Biritish 'Baayyee Afriikaa kan ta'eedha'' jechuun didanii booda ture. Booda gara Amajjii darbe keessa UK keessatti gadhiifame.
Barreessituun kunis maxxansitoonni Biritishiifi dubbiftooonni erga waa'ee afriikaa dubbisaniin booda taatuuwwan kan biyyoota awurooppaa ykn kan Afriikaa ta'u adda baasuuf waan ittiin wal bira qaban wayii qabaachu qabu jettee jirti.
Garuu Kintu dhugaatti Afriikaadha jettee jirtis.
Kitaabichis mammaaksaafi seenaa haala hima seenaa maatii Yugaadnaa warra waggoota 250f abaaramneera jedhanii kan hordofeedha.
"Dhugumatti Awurooppaa ilaleen jira,'' jetti barreessituun kun. ''garuu xiqqoo kan baayyate natti fakkata. Afaan haallin itti barreesse, haala warra Awuroppaanootaatiin hin barreefamne. Garuu akkan yaaduutti kun amma jalqaba ta'a.
Naasuu Jireenya Biritish
Odeessa seenaa waan Amajjii itti aanu ta'u barbaacha qorannoof deemuun ishee hinbarbaachifne. Inni kan jaalalli Maanchistar keessaa taasiseedha.
"Seeneesa kanan barreesse haalan lammiilee Yugaandaatiifan deebiisee barreesse, waan nurratti raawwatamu isaanitti himuudha,'' jetti. ''Kanan isaanitti himus 'Gara Biriteen dhufuu barbaaddaa? Daqiiqaadhaaf dhaabadhaa. Jalqaba kitaaba kiyya dubbifahda.''
Kanaafuu, osoo kana raawwatanii Yugaandoonni waa'ee Biriteen hubannoo attamii qabaatu?
''Waa'ee addunyaa isaan kana dura hindhagahiin miti. Yoo Yugaandaa keessa jirtu, Biritish jechuun agartuu Landan, Marasaa Bakingihaam, Saavoy, Riitz. Kunis sababii haala Biriteen ittiin ofi ibsite waan ta'eefiidha.
''Garee hojataa gonkumaa hinagartu. Kanadha kan akka dinqisiifattu si taasisu. Akkasumas waan nama naasisuudha.
''Asi dhuftee garee hojtaa ni agarta. Xiyyeefannaa barreessaa Dickaniif kennuun qaba jechu jaalata.''